Topy Maso Momba An’i Nikaragoà | Tany sy Mponina
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Bichlamar Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Lingala Litoanianina Luvale Malagasy Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Norvezianina Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tailandey Tigrigna Tiorka Tok Pisin Tseky Tsonga Twi Vietnamianina Xhosa Zoloa Éwé
Ny Nosy Ometepe no anisan’ny misongadina eo amin’ny Farihin’i Nikaragoà. Lonaka be izy io ary misy tendrombohitra volkano roa, izay ampitohizin’ny andilan-tany
MATETIKA ny olona no miantso an’i Nikaragoà hoe tanin’ny farihy sy volkano. Any no misy ny farihy lehibe indrindra any Amerika Afovoany. Farihin’i Nikaragoà no anaran’izy io, ary antsoin’ny tompon-tany hoe Cocibolca, na “Ranomasina Mamy.” Misy nosy an-jatony ao. Io ihany no ranomamy misy hazandrano fahita any an-dranomasina, toy ny antsantsa, trondro mivava-tsofa, ary bekapoka.
Ny franzipanie no voninkazo mampiavaka an’i Nikaragoà
Any Nikaragoà koa no misy ny toerana mitokana indrindra any Amerika Afovoany, dia ny Morontsirak’i Mosquito. Mahatratra 65 kilaometatra ny sakan’izy io, ary manaraka ny morontsiraka atsinanan’i Nikaragoà ka hatrany Honduras ny lavany. Ny Miskito (na Mosquito) no anisan’ireo tompon-tany any. Efa talohan’ny nahatongavan’ny Eoropeanina, tamin’ny taonjato faha-16, izy ireo no nonina tany.
Mifankatia be ny Miskito ary miavaka ny kolontsainy. Tsy manana teny manaja toy ny hoe “Andriamatoa” na “Ramatoa”, ohatra, izy ireo. Izany no mahatonga ny ankizy any ambanivohitra hiantso ny olon-dehibe hoe “Dadatoa” na “Nenitoa”, na havany ilay olona na tsia. Izao no fanaon’ny vehivavy mpinamana akaiky na mpihavana rehefa mifampiarahaba: Ataony mifampikasoka ny takolany ilany, dia mifoka rivotra lalina ilay vehivavy nanomboka an’ilay fiarahabana.
Boky ara-baiboly amin’ny teny mayangnan sy miskito, navoakan’ny Vavolombelon’i Jehovah
Mponina: 6 176 000
Fiteny: Espaniola. Ny miskito, mayangnan, rama, ary kreôla anglisy anefa no tena fampiasa any amin’ireo faritany mizaka tena
Toetany: Mafana amin’ny ankapobeny, fa mangatsiatsiaka kosa ny any afovoan-tany
Vohon-tany: Lemaka ny any amoron-tsiraka, fa be tendrombohitra ny any afovoan-tany
A. Ny hoe Nikaragoà dia avy amin’ny anaran’ilay lehibem-poko fahiny hoe Nicarao.
B. Io irery no firenena any Amerika Latinina sady nozanahin’ny Espaniola no nozanahin’ny Anglisy.
D. Notafihin’ny jiolahin-tsambo avy any Karaiba ireo tanàna manamorona ny Farihin’i Nikaragoà, nandritra ny taonjato maro.
E. I Nikaragoà no vitsy mponina indrindra any Amerika Afovoany.
Valiny: Marina daholo.
Hizara Hizara Fitsidihana An’i Nikaragoà